တက္ကသိုလ်မြတ်မင်း: ဗီယက်နမ်နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနဲ့ ခေတ်သစ်မြန်မာ
တိုင်းပြည်ကြီး၊ ပျက်စီးယိုယွင်းလာသည်ကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသူများက ၁၉၈၆ ကွန်မြူနစ်ပါတီကွန်ကရက်ကြီးတွင် အစိုးရအဟောင်းကို အသစ်နှင့်အစားထိုးလိုက်သည်။ အသက် ၇၁ နှစ်အရွယ်ရှိသော ငုရင်ဗင်လင့်ဆိုသူ ပါတီအကြီးအကဲဖြစ်လာပါသည်။ ထိုမှစပြီး အရှေ့တောင် အာရှနိုင်ငံမှ၊ ကွန်မြူနစ် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများဖြင့် ဒီမိုကရေစီစနစ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ Doi Moi အင်္ဂလိပ်စကားလုံ Renovation ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိသည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် ၄ နှစ်အတွင်း ဥရောပါ၊ အမေရိကတို့နှင့် ဆက်ဆံရေးပြန်လည်ရရှိခဲ့သည်။ စက်မှု၊ လယ်ယာ၊ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများတွင် တဟုန်ထိုးတိုးတက်ခဲ့သည်။ သို့သော် ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းတွင် ယခင်အရိုးစွဲနေသောအကျင့်များ၊ ကြိုးနီစနစ်များ မကုန်နိုင်သောကြောင့် နှေးကွေးသွားရပြန်သည်။ ၂၀၀၄ နောက်ပိုင်းတွင် ပြည်ပရောက်ဗီယက်နမ်များစွာ ပြန်လာသောကြောင့် စီးပွားပြန်လည်တိုးတက်လာသော်လည်း မှန်းသလောက်ဖြစ်မလာသေးပါ။ ငုယင်ဗင်လင့် ၁၉၉၁ မှာ ကျန်းမာရေးအရ၊ အနားယူသွားပြီး၊ ဗီယက်နမ်ရဲ့ ပြင်ပြင်ပြောင်းလဲမှုပြဿနာများကို ဆက်လက်ပြောဆိုရေးသားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲချမ်းသာကွာခြားလွန်းခြင်း၊ အမေရိ ကန်ကုမ္ပဏီများက ဗီယက်နမ်များကို နည်းပညာမပေးပဲ၊ အမေရိကန်ရောင်းမကုန်ပစ္စည်းတွေပဲ လာပုံချသွားခြင်းများက အပြစ်တင်ရေးသားခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်ခေါင်းဆောင်များကြားတွင် ချစားမှု၊ အာဏာအလွဲသုံးမှုများကိုဖြစ်လာပြန်သည်ကို ခေါင်းဆောင်ဟောင်းကြီး က ထောက်ပြခဲ့သည်။
မြန်မာခေါင်းဆောင်များ မည်သည့်သင်ခန်းစာများ ဗီယက်နမ်မှရယူသွားသနည်း ကိုမူ စောင့်ကြည့်ရန်သာရှိပေသည်။
ဗီယက်နမ်များ၏ မျိုးချစ်စိတ်ဓါတ်သည် သူ့ကျွန်မခံ၊ အလွန်မာကြောလှပါသည်။ တရုတ်ပြည်၊ မွန်ဂိုအင်ပါယာလက်ထက်မှာ မြန်မာပြည်ကို မွန်ဂိုတရုတ်တပ်များ ၀င်ရောက်သိမ်းပိုက်ပြီး၊ ပုဂံမင်းဆက်ကို ပျက်သုန်းစေခဲ့သော်လည်း ဗီယက်နမ်ကို မွန်ဂိုတရုတ်များ ၀င်ရောက်တိုက် ခိုက်တဲ့အခါ ဗီယက်နမ်များက တွန်းလှန်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သည်။ သို့သော် ဥရောပနယ်ချဲ့များကိုတော့ အရှုံးပေးခဲ့ပြီး၊ ပြင်သစ်ကိုလိုနီနိုင်ငံအဖြစ် နှစ်ပေါင်းများစွာနေခဲ့ပြီး၊ တော်လှန်ရေးတိုက်ပွဲမှာ ဘိန်ဒိန်ဖူးစစ်ပွဲကြီး ၁၉၅၄ မှာ ပြင်သစ်စစ်တပ်ကြီး ပိတ်မိ၊ လက်နက်ချ အရှုံးပေးပြီး ဗီယက်နမ်ကထွက်ခွာခဲ့တဲ့ ရာဇ၀င်ရှိသည်။ နောက်ပိုင်း ကွန်မြူနစ်စနစ်ထွန်းကားတဲ့ ၁၉၇၀ ခေတ်လောက်က၊ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲဆိုပြီး အရှေ့ တောင်အာရှမှာ ကွန်မြူနစ်နဲ့အရင်းရှင်စနစ် ၂ ခု အပြင်းအထန်တိုက်ခိုက်ကြတဲ့မြေဇာပင် ဗီယက်နမ်ဖြစ်ပါသည်။ အရင်းရှင် ဒီမိုကရေစီအဘိုးကြီး အမေရိကန်ခမျာ ၁၅ နှစ်လောက် ယခုခေတ်၊ အီရက်ထက်ဆိုးတဲ့စစ်ပွဲကြီးကိုတိုက်ခိုက်ရင်း ၁၉၅၇ မှာ ဗီယက်နမ်က ရှုံးနိမ့်ထွက်ခွာ လာခဲ့ရသည်။
၀ီကီမှတ်တမ်းအရ နိုင်ငံခြားရောက်ဗီယက်နမ်လူဦးရေမှာ ၄ သန်းခန့်ရှိသည်။ အများဆုံးမှာ အမေရိကန်တွင် ၁.၈ သန်းရှိသည်။ ကမ္ဘောဒီး ယားတွင် ၆ သိန်း၊ တိုင်ဝမ် ၂ သိန်းခန့်၊ ပြင်သစ်တွင် ၂ သိန်းခွဲ၊ သြစတြေးလျား၊ ကနေဒါ၊ လာအို၊ ရုရှား၊ တောင်ကိုးရီးယားတို့တွင် တစ် သိန်းခွဲကျော် စသဖြင့်ရှိကြသည်။ အများစုမှာ ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအပြီး စစ်ပြေးများဖြစ်ကြသည်။ ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီက ၂၀၀၀ နောက် ပိုင်းတွင် စီးပွားရေးတံခါးဖွင့်ဝါဒ စတင်ကျင့်သုံးလာပြီး၊ နိုင်ငံခြားရှိဗီယက်နမ်များအား ပြန်လာရန်ခေါ်သော်လည်း အများစုမှာ ဗီယက်နမ် ကွန်မြူနစ်အစိုးရကို ဆန့်ကျင်ကြသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် ယခင်တောင်ဗီယက်နမ် ၀န်ကြီးချုပ်ဟောင်း Nguyễn Cao Kỳ ပြန်လာပြီးသည့် နောက်တွင်၊ ကွန်မြူနစ်အစိုးရနှင့် နိုင်ငံခြားရောက်ဗီယက်နမ်များ ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်လာခဲ့သည်။ အစိုးရပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ အနည်း ငယ်စတင်ချိန် ၁၉၈၇ တွင် နိုင်ငံခြားရောက် ဗီယက်နမ် ၈၀၀၀ ခန့်သာပြန်လာကြသော်လည်း၊ ပြုပြင်ရေးအရှိန်ရလာသည့် ၂၀၀၄ တွင် လေးသိန်းကျော် ၄၃၀၀၀ ပြန်လာကြသည်။ ပညာတတ်၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာသည့်ဗီယက်နမ်များစွာတို့မှာ ကွန်မြူနစ်အစိုးရ လူ့အခွင့်အရေးမ ရှိမှုများကြောင့် ပြန်မလာကြသေးပါ။ ဗီယက်နမ်အစိုးရကလည်း ပြန်လာရန် နည်းမျိုးစုံနှင့် ကြိုးစားဆွဲဆောင်ဆဲပင်ဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် ဗီယက်နမ်အကြီးအကဲ၊ သမ္မတ အမေရိကန်ခရီးစဉ်ထွက်ခွာစဉ် အမေရိကန်ရောက်ဗီယက်နမ်များဆန္ဒပြမှုကို စိုးရိမ်ခဲ့ရသည်။ အမေရိကရောက် ဗီယက်နမ်များမှာ ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်အစိုးရကို မကျေနပ်နေဆဲဖြစ်သည်။ ဗီယက်နမ်များစွာ ၂၀၀ နောက်ပိုင်း တွင်လည်း အမေရိကသို့ အခြေချ၊လာရောက်နေဆဲဖြစ်သည်။ မှတ်တမ်းအရ အမေရိကန်ရောက် ဗီယက်နမ်အရေအတွက်မှာ ၁၉၈၀ တွင် ၂ သိန်းကျော်မှ၊ ၁၉၉၀ တွင် ၆ သိန်းကျော်လာပြီး၊ ၂၀၀၀ တွင် တစ်သန်းတစ်သိန်း ရှိခဲ့သည်။ ဆက်လက်ဝင်ရောက်လာဆဲဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ တွင် တစ်သန်း ၈ သိန်း (နောက်ထပ် ၇ သိန်း ထပ်မံတိုးပွားလာခဲ့သည်။) အများအားဖြင့် အမေရိကန်နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူပြီးသူများ ဖြစ်ပြီး၊ ကုန်တိုက်ပိုင်ရှင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များစွာရှိသလို အမေရိက ထိတ်တန်းပညာတတ်များ၊ အာကာသယာဉ်မှူး၊ လွှတ်တော်အမတ်၊ အစိုးရ ရာထူးကြီးများ၊ နိုင်ငံကျော် အားကစား၊ အနုပညာ၊ ဂီတသများ များစွာကို ပေါ်လာခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ဗီယက်နမ်များစွာနေထိုင်သော ကာလီဖိုးနီးယား၊ Orange County တွင် ဗီယက်နမ်-အမေရိကန် ၃ ဦး County Supervisor ရွေးကောက်ပွဲ၊ အကြိတ်အနယ်ပြိုင်ဆိုင်ခဲ့ရာ အသက် ၃၂ နှစ်အရွယ်၊ ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီး Janet Q. Nguyen အရွေးခံရသည်။ ပထမဆုံးဗီယက်နမ်အမျိုးသမီး County Supervisor ဖြစ်သည်။
• ဗီယက်နမ်ဒီမိုကရေစီ Viet Tan နိုင်ငံရေးအဖွဲ့
၁၉၈၂ ခုတွင် ကွန်မြူနစ်အစိုးရကို တော်လှန်သည့်၊ မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းအဖြစ် စတင်ခဲ့သည်။ ပြည်ပရောက်ဗီယက်နမ်များ ထောက်ခံမှု ရရှိသော်လည်း၊ ကွန်မြူနစ်အစိုးရ၏ နှိပ်ကွပ်၊ ဖိနှိပ်မှု၊ ထောင်သွင်းအကျဉ်းချမှုများကိုခံရသည်။ ၂၀၀၄ နောက်ပိုင်းတွင် မြေပေါ်အဖွဲ့အစည်း အနေဖြင့်လှုပ်ရှားခဲ့သော်လည်း ကွန်မြူနစ်အစိုးရက ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ခွင့်မပေးခဲ့။ တစ်ပါတီစနစ် ဗီယက်နမ်တွင် ဒီမိုကရေစီလိုလား သူများကို အစိုးရအဖွဲ့တွင် ပါဝင်ခွင့်မရခြင်းမှာ ဗီယက်နမ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အားနည်းချက်ပင်ဖြစ်သည်။ Viet Tan အဖွဲ့ကို အကြမ်းဖက်သမား အဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းကို အမေရိကန်အစိုးရလက်မခံပါ။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံရေးပူးပေါင်းမှု၊ ဗီယက်နမ်တွင် မရရှိသေးပါ။ ၂၀၀၈ တွင် အမေရိကန်လူမျိုး Viet Tan အဖွဲ့ဝင်၊ ဗီယက်နမ် ၃ ဦး၊ ဗီယက်နမ်တွင် ဖမ်းဆီး၊ ထောင်ချခံခဲ့ရပြီး တိုင်းပြည်မှနှင်ထုတ်ခံရသည်။ ၂၀၁၀ မှ ၂၀၁၂ (ယခုအချိန်ထိ) မြို့တော် ဟနွိုင်းမြို့တွင် ပြည်တွင်းရှိ Viet Tan အဖွဲ့သားများက အစိုးရကို လူအခွင့်အရေး နိုင်ငံရေး ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြပွဲများ၊ တရုပ်ပြည်မတရားစီးပွားလုပ်ငန်းများကိုခွင့်ပြုပေးခြင်းအတွက် ဆန္ဒပြပွဲများကို ငြိမ်းချမ်းစွာပြုလုပ်ခဲ့ရာ ကွန်မြူနစ်အစိုးရက အမြောက်အများ ကို ဖမ်းဆီးထိမ်းသိမ်းခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်သို့ပူပေါင်းပါဝင်ကာ သြစတြေးလျမှ Viet Tan အဖွဲ့ဝင်များကိုလည်း ဖမ်းဆီးကာ၊ တိုင်းပြည်မှနှင် ထုတ်ခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကိုလည်း ဗီယက်နမ်အစိုးရက ကျပ်တည်းစွာထိမ်းချုပ်ထားသည်။
များသည် စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာ မြန်မာထက် ရာဇ၀င်မှာ မှတ်တမ်းကြီးရှိပါတယ်။ သို့သော်လည်း စည်ပင်သာယာဝပြောတဲ့ နိုင်ငံသားအဖြစ်တော့၊ မြန်မာပြည်ရဲ့ရာဇ၀င်ကို မယှဉ်နိုင်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အရှေ့တောင်အာရှသာမက၊ အာရှတခွင်အထိ ၁၉၄၀-၁၉၇၀ နှစ်ပိုင်းများက ရာဇ၀င်မှတ်တမ်းများစွာ တင်ထားခဲ့ပါသည်။ အကျဉ်းရေးရရင် ကုလသမဂ္ဂအကြီးအကဲ ဦးသန့်၊ ဂျပန်ကိုတော်လှန်တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၊ အရှေ့တောင်အာရှမှာ အကြီးဆုံး မြန်မာသင်္ဘောလိုင်း Five Star၊ ရန်ကုန်ဆိပ်ကမ်း၊ အကြီးဆုံးဖြစ်ခဲ့သော မင်္ဂလာဒုံလေယာဉ်ကွင်း၊ မြန်မာလေကြောင်း BAC စသည်တို့ စန်းပွင့်ခဲ့စဉ်များ အခုကမ္ဘာတလွှားနာမည်ယူနေတဲ့ စင်ကာပူအဲယားလိုင်း၊ ထိုင်းအဲယားဝေး၊ လေဆိပ်ကြီးများ လုံးဝမပေါ်ထွန်းသေးပါ။ မြန်မာ Five Stars သင်္ဘောများ ကမ္ဘာတခွင် ကူသန်းနေချိန်မှာ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံများ ကမ္ဘာတခွင်မောင်းတဲ့၊ သင်္ဘောလိုင်းများ မရှိသေးပါဘူး။ အားကစားမှာလည်း အာရှတိုက်မှာ ဘောလုံး၊ ပြေးခုန်ပစ်တွေမှာ ကိုးရီးယား၊ ဂျပန်တို့နဲ့ ထိပ်တန်း ယှဉ်ပြိုင်နိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၁၀ မှာ GDP US$ ၂၂၀ billion, လူဦးရေ ၉၁ သန်းရှိသော ဗီယက်နမ်၏ ပျမ်းမျှလူတဦး၊ တနှစ်ဝင်ငွေမှာ US$ ၁၃၀၀ သာရှိပါသည်။ GDP per capital (nominal)။ လက်ရှိမြန်မာပြည်၏ GDP US$ ၇၈ billion, လူဦးရေ သန်း ၆၀၊ ပျှမ်းမျှ တဦးချင်း တနှစ်ဝင်ငွေမှာ US$ ၈၃၀ ရှိသောကြောင့် ဗီယက်နမ်ကိုမှီဖို့ သိပ်မဝေးဖူးဟုသိရသည်။ အဘယ့်ကြောင့် ဗီယက်နမ်တိုးတက်မှုမှာ ထင်သလောက်မမြန်ရခြင်းမှာ ပြည်ပရောက် ဗီယက်နမ်များကို ကိုးရီးယားအစိုးရကဲ့သို့ မဆွဲဆောင်နိုင်သောကြောင့်ဖြစ်ပေမည်။ အထူးသဖြင့် ပြည်ပအခြေစိုက် ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေး အဖွဲ့ Viet Tan၊ မြေအောက်အဖွဲ့အစည်းမှ မြေပေါ်သို့ ၂၀၀၄ နောက်ပိုင်း ရွှေ့ပြောင်းလာသော်လည်း အတိုက်အခံဒီမိုကရေစီများ ဗီယက် နမ်အစိုးရအဖွဲ့သို့ မ၀င်နိုင်ကြပါ။ အတိုက်အခံမရှိခြင်း – ဤအချက်သည် ဗီယက်နမ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရှိန်ကို တုံ့နှေးစေပါသည်။
၁၉၇၅ နောက်ပိုင်း တစ်ပါတီ ကွန်မြူနစ်လူ့ဘောင်ကိုထူထောင်ရင်း၊ ၁၉၈၉ နောက်ပိုင်း၊ တရုတ်ပြည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများ အောင်မြင်လာ ချိန်၊ အရင်ကရန်သူဖြစ်ခဲ့သောအမေရိကန်နဲ့ ပြန်လည်သင့်မြတ်ခဲ့ပါသည်။ ဗီယက်နမ်လူမျိုး သန်းနဲ့ချီပြီး ကမ္ဘာတ၀ှမ်းလွှင့်သွားရသူများ ဗီ ယက်နမ်အစိုးရက ပြန်လည်လက်ခံပါသည်။ အရှေ့တောင်အာရှ ASEAN အဖွဲ့ဝင်အဖြစ် မြန်မာနောက်မှဝင်လာသော်လည်း မြန်မာထက် ဦးစွာပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်ငွေကြေး Dong ကိုတည်တံ့စေပြီး၊ ၂၀၀၀ ခုနှစ်မှာ စတော့အိတ်ချိန်း Ho Chi Minh Stock Exchange HOST ကို ကုမ္ပဏီ ၂ ခုရဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂ . ၇သန်း တန်ဖိုးနဲ့စတင်ခဲ့သည်။ ၂၀၁၀ ခုနှစ် ၁၀ နှစ်အကြာမှာ စတော့အိတ်ချိန်းဟာ ကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၄၀ ကျော်ပါဝင်ခဲ့ပြီး အမေ၇ိကန်ဒေါ်လာ ၂၈ ဘီလျှံ ရှိနေပြီဖြစ်သည်။
ဗီယက်နမ်မှာ ကွန်မြူနစ်တပါတီစနစ်နဲ့ တလွဲမျိုးချစ်တွေရှိနေပြီး လာဘ်စားမှုများ (တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု) စံညွှန်း Corruption Perceptions Index မှာ အဆင့် ၁၁၂ မှာရှိနေတဲ့အတွက် စင်ကာပူလုပ်ငန်းရှင်များပြောတဲ့ ဗီယက်နမ်မှာ လာဘ်စားမှုများမှာ ဟုတ်ပါလိမ့်မည်။ ကိုယ်တိုင် သွားနေထိုင်လေ့လာကြည့်နိုင်မှ အသေချာသိနိုင်မှာပါ။ သမ္မတကြီး ဦးသိန်းစိန်တို့အဖွဲ့က ပေါ်လစီလုပ်နည်းတွေပဲ လေ့လာ၊ ပူပေါင်းလုပ်ကိုင်ဖို့ သွားသောကြောင့် လာဘ်စားမှုတွေကို မြင်သွားမှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ (လက်ရှိ ကိုယ့်မြန်မာပြည်က ပိုဆိုးနေပါသည်)။
ဗီယက်နမ်တွင် တိုင်းရင်းသားများစွာမရှိပါ။ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်သူပုန်များလည်း မရှိပါ။ ထိုအချက်ကြောင့် တိုင်းပြည်ငြိမ်သက်မှုရ ရှိပါသည်။ သို့ရာတွင် ပြည်တွင်းပြည်ပဒီမိုကရေစီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသည့်ဗီယက်နမ်များနှင့် လက်ရှိဗီယက်နမ်အစိုးရတို့ ရင်ကြားစေ့မှု မရရှိ သေးခြင်းသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု၏ အခက်အခဲတခုဖြစ်နေပါသည်။
သို့သော် လက်ရှိအခြေအနေတွင် ဗီယက်နမ်သည် မြန်မာပြည်ထက် စီးပွားရေးအရ များစွာသာလွန်နေသည်။ ဗီယက်နမ်ကဲ့သို့ မြန်မာလူမျိုး များ ၄ သန်းခန့်လည်း နိုင်ငံတကာသို့ ပြန့်ကျဲနေချိန်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်တွင်ပင် မြန်မာ ၂ သိန်းခန့် ရှိသည်။ မြန်မာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုသည် ဒီမိုကရေစီအင်အားနှင့်၊ ပြည်ပရောက်မြန်မာပညာရှင်၊ စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်များကိုဆွဲဆောင်နိုင်လျှင် နှစ်တိုတိုနှင့် ဗီယက်နမ်စီးပွားရေးကို သာလွန်နိုင်ဖွယ်ရရှိပေသည်။
• GDP Dream အိပ်မက်ပမာ
ထိုင်းနိုင်ငံကုန်ထုတ်စွမ်းအားကို ၁၀ နှစ်အတွင်း မှီတော့မည်လား..။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယခင် ၇ နှစ်အတွင်း GDP တိုးတက်နှုန်းနှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ၃ နိုင်ငံကိုနှိုင်းပါက မြန်မာနိုင်ငံ၏ နှစ်စဉ်တိုးတက်နှုန်းသည် အခြားနိုင်ငံများထက် များစွာများသာနေသည်။ ၇ နှစ်အတွင်း မြန်မာ- ၆.၅ဆ၊ ဗီယက်နမ်- ၂.၃ဆ၊ ထိုင်း- ၁.၉ဆ၊ မလေးရှား- ၁.၈ဆ ဖြစ်ပါ သည်။ ထိုတိုးတက်နှုန်းအတိုင်းသာဆိုပါက GDP အနည်းဆုံးဖြစ်သောမြန်မာနိုင်ငံသည် ၂၀၁၅ တွင် ဗီယက်နမ်ကိုကျော်မည်။ ၂၀၁၇ တွင် မလေးရှားကိုကျော်လွန်သွားပြီး ၂၀၂၀ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ ထိုအိပ်မက်သည် iMF Nominal GDP data – http://www.imf.org/external/datamapper/index.php ကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ ထိုအိပ်မက် တကယ်ဖြစ်လာစေရန် နိုင်ငံခေါင်းဆောင်များမှာ အဓိကတာဝန်ရှိသော်လည်း၊ ကျွန်ု၏စိတ်နေစိတ်ထား Good Attitude သို့ပြောင်းလဲရေးသည် ပိုအရေးကြီးပါသည်။
အိမ်မက်ပမာ ဗီယက်နမ် GDP ကို ၂၀၁၅ တွင် အမှီလိုက်ရေး၊ ၂၀၂၀ တွင် ထိုင်းနိုင်ငံကိုမှီရေး၊ မြန်မာအစိုးရ ဘာလုပ်သင့်သည်ကို ကျွန်ုပ် ရေးလျှင် ရေးမကုန်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်သင့်သနည်းကိုရေးသည်က ပိုသဘာဝကျပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့ငယ်စဉ်က မုံရွာမြို့၊ မြို့မဂါတ်၊ မူလတန်းကျောင်းရှေ့မှာ သစ္စာဆိုခဲ့ပါသည်။ မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်၊ မိမိအတန်းကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်၊ မိမိကျောင်းကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်။ မိမိတိုင်းပြည်တွက် ကောင်းအောင်ကြိုးစားမည်ဟူသော သစ္စာဓိ ဌာန် ၄ ချက်အရ၊ ပထမဆုံးလုပ်ရမည်မှာ မိမိအတွက်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ မိမိအိပ်ထဲချည်း မပြည့်မချင်းထည့်သည့် မိမိကောင်းစားရေး၊ တကိုယ် ကောင်းစိတ်ထားမှာ စစ်အာဏာရှင်စနစ်နှင့် ချန်ထားရစ်လေပြီ။ မိမိ အိမ်၊ ကား ဘယ်လောက်ကြီးကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဆိုသည်ထက် ထိုအိမ် ကြီး၊ ကားကြီးတွင် လူဘယ်နှစ်ယောက် နေထိုင်၊ စီးနင်းကြပါသလဲဆိုသည်က ပိုအရေးကြီးပါသည်။ မိမိငွေ၊ စတော့ရှယ်ယာများ ဘယ် လောက်များများချမ်းသာသည်ဆိုသည်က အရေးမကြီးပါ၊ သူဌေးကြီးဘီးလ်ဂိတ်ကဲ့သို့ သူ့လက်အောက် သန်းကြွယ်သူဌေးများစွာ မွေးထုတ် ပေးနိုင်ခြင်းသည် ပိုအရေးကြီးပါသည်။ မိမိပိုင်ဆိုင်မှုများသည် မိမိသေလျှင် နိုင်ငံတော်လက်ထဲရောက်မည်သာဖြစ်သည်။ ကံဇာတာမ ကောင်းပါက မိမိမသေမီ ငွေကြေးဖိစီးမှုကို ကောင်းကောင်းခံရမည်။ သို့မဟုတ် မိမိသားသမီးများလက်ထက် ကဋေကြွယ်သူဌေးသား၊ ဆင်း ရဲသွားသလို ဖြစ်နိုင်ပါသည်။
ထိုကြောင့် မိမိတတ်ကျွမ်းသောပညာရပ်များ၊ စုဆောင်းမိသောဥစ္စာများကို ပြန်လည်ဝေငှရပါမည်။ မြန်မာလို တရားစကားနှင့်ပြောရလျှင် အမျှဝေရပါမည်။
• မည်သူနှင့် စတင်အမျှဝေရမည်နည်း
မိမိဇနီး၊ ခင်ပွန်းနှင့် ဥပမာ .. ကျွန်တော်က မိမိဇနီးနှင့်စတင်ရသည်။ နှုတ်အားဖြင့် အကြံပေး၊ အပြစ်တင်၊ ရန်ထောင်၊ စကားနာထိုး၊ အ တင်းကျပ်ခိုင်းစေမှုများကို ကျွန်ုပ်မှ တဖက်သတ်စတင်ရပ်ဆိုင်းရပါမည်။ ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်ရမည့် အိမ်ထောင်၊ မိသားစုတာဝန်များကို စ ကားမပြောပဲ Action Speaks Louder than Word စကားပုံအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပြရန်ဖြစ်သည်။ မိမိဖက်မှ တဖက်သတ်ကောင်းမှုများကို လုပ်ဆောင်ပြလျှင် ကျွန်ုပ်ဇနီးသည် သေချာပေါက် Newton Law အရ တုံ့ပြန်မှုကောင်းများရရှိလာသည်။ ကျွန်ုပ် တခါမှဝယ်မပေးဖူးသော ပန်းတပွင့်၊ လက်ဆောင် ဇနီးသည်အား ၀ယ်ပေးခြင်းမျိုးကို ဇနီးက ကျွန်ုပ်ကို သံသယဖြစ်သွားပေမည်။ ထိုသို့အပြုအမှုများ Over Action သတိထားရှောင်ရမည်။ ပုံမှန်ဆက်ဆံရန်ဖြစ်သည်။ တဖြေးဖြေး ကျွန်ုပ်စိတ်နေစိတ်ထားများ Attitude ကို တဖက်သတ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်း၊ တလ၊ နှစ်လအတွင်းမှာပင် ဇနီးသည်သည် Positive Thinking များဖြစ်လာပါသည်။ မိသားစုပြသနာများဖြစ်သော အလုပ်လက်မဲ့အခြေနေ၊ သားသမီးအရေး၊ ငွေကို ချွေတာသုံးစွဲမှုများ၊ သူ့ဆွေမျိုး၊ ကိုယ့်ဆွေမျိုးပြဿနာများတွင် စိတ်သဘောတူလာသည်။ အိမ်ထောင်ငွေကြေး အခြေအနေလည်း ကောင်းလာသည်။
ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့် အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေသောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်အလုပ်တွင်လည်း အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမားများနှင့်အဆင်ပြေမည်မှာ သေချာ ပါသည်။
ချစ်မိတ်ဆွေ၊ …. ဗီယက်နမ်စီးပွားရေး GDP ကို မြန်မာ ၃ နှစ်အတွင်းမှီရန် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်မည်။ အစိုးရခေါင်းဆောင်များအဖို့ အခြားစဉ်း စားစရာ အခြားကဏ္ဍများစွာရှိသည်။ ပညာရေး၊ စစ်ရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လယ်ယာ၊ စက်မှု၊ စွမ်းအင်၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ ဆက်သွယ်ရေး.. စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက် ၁၀ နှစ်လုံး ဇနီး၊ ခင်ပွန်းနှင့် တနေ့တခါ အနည်းဆုံး အသံကျယ်ကျယ်၊ အသံမာမာ အချေတင်ပြော ခြင်းများမှ၊ သုံးရက်တခါ လျှော့သွားအောင်လုပ်ဖို့ တော်တော်ခက်မည် သေချာပါသည်။ ဂျာမန်လူမျိုးများ ဂျမန်စစ်တပ်တွင် ဒေါသဖြစ်ပါက၊ ပြန်မပြောပဲ၊ တညအိပ်ပြီး နောက်တနေ့မှ ပြောရသည်။ ကျွန်ုပ်မှစတင်ပြီး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရမည်။ “လ” သုံးလုံး – “လာဘ်၊ လိင်၊ လောင်က စား” များကို အနာဂါတ်ခေါင်းဆောင်လူငယ်များနှင့်ဝေးစေရန်လည်း ကျွန်ုပ်မှာတာဝန်ရှိပါသည်။
ဤသီု့ဖြင့် မိမိကိုယ်ကို ကောင်းအောင်ကြိုးစားရာတွင်၊ ဗီယက်နမ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးမှာ သင်္ခန်းစာမျာကိုယူနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောမျိုး ချစ်စိတ်ရှိပြီး၊ စိတ်ရင်းစေတနာ Attitude ကောင်းသူများဖြင့်၊ ငွေစကားမပြောသူများ စုပေါင်းလုပ်ကိုင်ပါက အောင်မြင်မှုရှိမည်ဖြစ်သည်။
tanveer hashmi June 1, 2017 at 4:49 PM